Kusunga Simba reSocial Media - Kurume 16, Tampa | Martech Zone
Mugovera, Kukadzi 13, 2010 Mugovera, Kukadzi 13, 2010 Douglas Karr
Bvisa chitsitsinho cherwendo rwakabudirira kuenda kuNew Orleans kuti utaure Webtrend's Engage 2010 musangano, Ndakakokwa na Jeremy Fairley kugara padanho kuYunivhesiti yeTampa's Center for Hutungamiri.
Ini ndakazopedza nguva yakati rebei naJeremy paakange achivhura mablogi ake kuTampa uye chirongwa chake chakazivikanwa munyika. Iye anonzwisisa maitiro ekukurudzira timu yake, kuyera mhedzisiro, uye anoenderera nekuvandudza zano rake. Ndiri kutarisira kubata!
Dare remangwanani richakurukura Kusunga Simba reSocial Media kune Bhizinesi. Heino ruzivo kubva kune yepamutemo saiti:
Musoro weSocial Media wakabata pfungwa dzevemabhizimusi muna2009. Misangano yakawanda nekukurukurirana pamhepo kwakapindura mubvunzo wekuti: "Chii chinonzi Social Media?"
Iyi hurukuro yedare inokwidziridzira hurukuro kusvika padanho repamusoro nekuunza pamwe nyanzvi dzeSocial Media vanozotarisa matanho anotevera ekupindura mubvunzo unonetsa: "Ini ndinoshandisa sei simba reSocial Media kuti bhizinesi rangu ribudirire?" Iyo hurukuro ichavhura ne Tampa Bay musangano weSocial Media kubudirira nyaya, uye ichiteverwa nhaurirano inotungamirwa nemuongorori pamwe nenyanzvi dzinozotarisa pazvinhu zvakakosha pakubudirira muSocial Media mashandisiro. Tevere, iyo pasi ichave yakavhurika kumibvunzo kubva kuvadzidzi vemusangano.
Kuenda panhaurirano yepaneru kunopa simba kuvatungamiriri vebhizinesi kutora mabhenefiti akasarudzika eSocial Media kuti vawedzere kuvepo kwekambani pamusika. Pakati peimwe misoro, panhivi ichatarisa: sei uye nguva yekushandisa vezvenhau zvinobudirira; maitiro ekubatanidza kushandiswa kweakawanda masocial media mapuratifomu; izvo zvemagariro enhau hazvigone kuzadzisa; zvakadii Social Media inodhura; maitiro ekuyera kubudirira; mashandisiro eSocial Media mune yeB2B nharaunda uye nezvine ramangwana rekushambadzira kweSocial Media.
Kana iwe uri muverengi kubva kuTampa Bay kana nzvimbo yeBradenton, ndinenge ndichibhururuka pasi mazuva akati wandei kutanga kupedza nguva nevabereki vangu (muBradenton). Ndokumbira undizivise nekukasira kana iwe uchida kusangana - ndinofanira kubhuka matikiti munguva pfupi!
Tags: Tsvaga KutengesaWordPress